IINDLEKO ZOKWAKHA IGARAJI (1, 2 & 3 ISIKHOKELO SAMAXABISO EMOTO) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Iindleko zokwakha igaraji (1, 2 & 3 Isikhokelo samaxabiso eMoto)
Yonke into ekufuneka uyazi malunga neendleko zokwakha igaraji kubandakanya i-1, 2, 3 yoyilo lwemoto.
Kubantu abaninzi, ukuphila obona bomi bumnandi kuthetha ukuba ekugqibeleni babe namakhaya abo kunye nemoto eyeyabo. Ke ngoku xa sele wakhe iphupha lakho, lixesha lokuba ucinge ngokwakha indawo yokuhlala ukukhusela imoto yakho yamaphupha.
Ukuba negaraji yokupaka izithuthi zakho kunceda ekuphuculeni ixabiso lepropathi yakho. Ikwakhusela notyalo-mali olwenzileyo ekuthengeni isithuthi sakho. Igaraji igcina imoto yakho ikhuselekile kwizinto. Ikwagcina ikhuselekile nakwizinto ezimbi okanye zolwaphulo-mthetho ezinokuthi zibone ithuba emotweni engakhuselekanga, ishiywe yodwa.
Usenokuzibuza ukuba uluhlobo luni lwegaraji oyifunayo kwaye lukhulu kangakanani uhlahlo-lwabiwo mali ekufuneka ulibekele bucala ukwakha igaraji oyifunayo. Ukukunceda wenze ingqondo yakho, kule posi, siphendula imibuzo eqhelekileyo malunga neendleko zokwakha igaraji.
uphahla olunzulu oluhlaza
Ixabiso eliphakathi lokwakha iGaraji
Iindleko ngeenyawo zenyawo nganye ukwakha iGaraji
Ixabiso elinye leeGaraji zeMoto
Iindleko zeGaraji ezimbini zeMoto
Iindleko zokwakha iGaraji engama-24 × 24
Iindleko zeGaraji yeeMoto ezi-3
Iindleko zokwakha iGaraji engama-30 × 30
Iindleko zokwakha iGaraji yeeMoto ezi-4
Ixabisa malini ukwakha iGaraji ekufuphi kuyo?
Iindleko zokwakha iGaraji eneNdlu
Iindleko zabasebenzi zokwakha iGaraji
Iindleko zokwakha iGaraji ngokwakho
Ixabiso eliphakathi lokwakha igaraji elula, nje isakhiwo ngaphandle kwempawu ezizodwa, iya kuba malunga ne-28,000 yeedola.
Ekugqibeleni, ixabiso lingahluka ngokokuhlala kwakho, ubungakanani begaraji , uhlobo lwayo, izinto ozisebenzisayo, nokuba wenza i-DIY okanye uqesha ikontraka. Ngokubanzi, nangona kunjalo, iindleko zokwakha igaraji ukusuka kwi-16,821 yeedola ukuya kwi-38,827 yeedola.
Ngokusisiseko, indleko zokwakha igaraji ixhomekeke kubungakanani bayo. Ngokomndilili, e-United States, kubiza malunga ne-50 yeedola unyawo ngalunye.
Ke, ukuba ufuna ukuqikelela ngokwakho ukuba kuyakubiza malini ukwakha igaraji kwipropathi yakho, kufuneka kuqala ulinganise indawo eza kuhlala kuyo igaraji yakho. Thatha imilinganiselo ngeenyawo ezikwere, kunokuphinda-phinda nge- $ 50.
Ixabiso eliphakathi lama- $ 50 leligaraji elula, ngokusisiseko iindonga ezine, umgangatho, kunye nophahla olunokuba yindawo yokuhlala iimoto zakho.
Kwiigaraji eziphezulu ezineempawu ezininzi okanye izinto zokugqibela eziphezulu, iindleko ziyenyuka. Unokufumana ukuhlawula malunga ne-120 ukuya kuma-350 kwinqanaba ngalinye lesikwere.
Ukulungiselela imoto enye, uya kudinga ubuncinci i-240 yeenyawo zenyawo zendawo. Ukuba ufuna ukongeza indawo encinci kwigaraji yakho, yithi ukuba ufuna ukongeza indawo yokugcina okanye indawo yokusebenzela encinci okanye ibhentshi lomsebenzi, iindleko ziya kunyuka.
Ngokubanzi, kwigaraji yemoto enye, uzakufuna ukusuka kuma-240 ukuya kuma-384 e-intshi zesithuba. Kolu luhlu, indleko ziya kuba malunga ne- $ 10,500 ukuya kwi- $ 27,000.
Ukwakha igaraji enokuhlala kakuhle iimoto ezimbini, uya kudinga ubuncinci i-320 ukuya kwi-528 yeenyawo zenyawo zendawo.
Ukuba sijonga kwigaraji apho iimoto ezimbini ziya kupakwa ecaleni, kuyakufuneka wakhe igaraji malunga ne-20 ukuya kwi-24 yeenyawo ubunzulu kwaye wabele ubuncinci i-11-12 yeenyawo ububanzi kwimoto nganye, ke kuyakufuneka igaraji elinobude obuziimitha ezingama-22 ububanzi.
Musa ukulibala ukuba kuyakufuneka ushiye indawo phakathi kweemoto kunye neemoto kunye neendonga ukuze ukwazi ukungena nokuphuma kwisithuthi. Ke, masithi ke igaraji yeemoto ezimbini kufuneka ubuncinci beenyawo ezingama-22 ububanzi kwii-26 iinyawo.
Unokujonga kwakhona ukwakha i- igaraji esecaleni , eyaziwa njengegaraji eziphantsi kabini. Kwigaraji enzulu ephindwe kabini, iimoto azimiswanga ecaleni kwenye; kunokuba enye imoto imiswe nzulu egaraji, kwaye enye imoto ipaka nje phambi kwayo.
Ukuba uthatha isigqibo sokuya kwigaraji eneeemoto ezimbini ezinzulu, kuyakufuneka wakhe phezu kwe-11 ukuya kwi-12 yeenyawo ububanzi, kodwa i-36 ukuya kwi-40 yeenyawo zenyawo ngokunzulu.
Ngokunikwa le milinganiselo, umndilili weendleko zizonke zokwakha igaraji yeemoto ezimbini ziya kuba malunga ne- $ 14,500 ukuya kwi- $ 40,300.
Ubungakanani obulungileyo begaraji yeemoto ezi-2, kunye neemoto ezimiswe ecaleni, ziya kuba ngama-24X24 okanye i-576 yeenyawo zizonke.
Iindleko zokwakha igaraji eyi-24 × 24 ziya kuba malunga ne-23,000 ukuya kwi-40,300 yeedola.
Ukugcina izindlu ezikhuselekileyo nangokukhuselekileyo iimoto ezintathu, ecaleni kwelinye kwigaraji, uya kudinga indawo engama-31 ukuya kuma-34 eemitha ububanzi. Kuxhomekeka kuhlobo lweemoto, uyakufuna igaraji enobunzulu be-20 ukuya kwi-24 yeenyawo.
Isangqa sokuthembisa isangqa sokubandakanya kunye nomsesane womtshato
Ukunikezelwa kwezi mfuno zobukhulu, kuya kufuneka uchithe i-28,200 yeedola ukuya kwi-57,100 yeedola ukwakha igaraji yeemoto ezintathu.
Ubungakanani obulungileyo begaraji ezintathu zeemoto buya kuba malunga ne-30 × 30 okanye i-900 yeenyawo zenyawo. Iindleko zokwakha igaraji engama-30 × 30 ziya kuba yi- $ 36,000 ukuya kwi- $ 63,000.
Ukuba ufuna ukwakha igaraji enokwakha iimoto ezine, ungayakha ukuze zonke zipakishwe ecaleni, okanye wakhe uhlobo olubanzi oluphindwe kabini olunokuvumela iimoto ezimbini ukuba zimiswe ecaleni kweminye imiqolo Mbini.
Kwigaraji yeemoto ezine, uyakufuna malunga ne-800 ukuya kwi-1,056 yeenyawo zenyawo zendawo kwaye oku kuyakubiza malunga ne-32,000 ukuya kwi-73,900 yeedola ukuyakha.
Igaraji egudileyo sisakhiwo esahlukileyo kumzimba ophambili wendlu yakho. Isekufuphi nendlu yakho, kodwa sisakhiwo esizimeleyo. Ngokwahlukileyo, igaraji eqhotyoshelweyo yile yakhiwe kanye ecaleni kwendlu yakho, ihlala ihlala ikwabelana ngodonga. Funda ngakumbi malunga ne- iqhotyoshelwe vs igaraji edibeneyo Apha.
Igaraji eyahlukileyo ibiza kakhulu ukwakhiwa kunegaraji eqhotyoshelweyo. Ixabiso legaraji eyahlukileyo liya kuba malunga ne-10 ukuya kwi-15% ngaphezulu kwegaraji eqhotyoshelweyo.
Nokuba ungakhetha eyiphi igaraji, indlela yokuqikelela ixabiso kukulinganisa indawo. Ngokubanzi, indleko zokwakha igaraji engafakwanga iya kuza kwi-40-70 yeenyawo iidola.
Isizathu esinye sokuba igaraji egxothiweyo ibize kancinci kunegaraji eqhotyoshelweyo bubuso bokuba igaraji egudileyo inokudinga izinto ezingaphezulu kunye nokulungiswa. Umzekelo, ukuba ufuna igaraji engafunekiyo ukuba ibe nezinto zombane, kuya kufuneka ufake imigca yamandla enokudibanisa igaraji yakho efumanekileyo kwigridi. Igaraji eqhotyoshelweyo, kwelinye icala, inokudityaniswa kwikhaya lakho iyenze isebenze ngakumbi kwaye ingabi nabasebenzi abaninzi.
Kulungiselelwe abo bafuna ukuchitha imali encinci a igaraji ephathekayo uyilo inokuba yenye indlela.
Ukuba uthatha isigqibo sokuba le nto ufuna ukuyakha yigaraji enegumbi, zilungiselele iindleko zokwakha ukuya phezulu.
Iindleko zenyawo nganye kwisikwere sokwakha igaraji enefulethi engentla kwayo imalunga ne- $ 110 ukuya kwi-350. Uhlobo lwendlu luya kuchaphazela iindleko zizonke zegaraji. Umzekelo, igumbi elinye elileloft liya kuba neendleko ezingaphantsi kwendlu epheleleyo enendawo yokuhlambela.
Gcina ukhumbula ukuba, iindleko zokwakha igaraji enefulethi ziya kwahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwegaraji. Igaraji enegumbi elinendawo yokuhlala iya kubiza ngaphezulu kwegaraji eqhotyoshelweyo enendawo yokuhlala. Kungenxa yokuba uya kuchitha ngaphezulu ukudibanisa igaraji eyahlukileyo kwigridi yombane kunye nemigca yokufaka imibhobho yamanzi ukuba ubusenza okufanayo kwigaraji eqhotyoshelweyo.
Ukuba uqesha umntu ukuba akwakhele igaraji, iirhafu zabasebenzi ziya kuthi ekugqibeleni zenze ama-50 t0 70 epesenti yexabiso lilonke lokwakha. Ke, ngokomndilili, iindleko zomsebenzi kulwakhiwo lwegaraji ziya kuba malunga ne-20 ukuya kwi-48 yeedola ngonyawo wesikwere.
Ukuba uthatha isigqibo sokwakha igaraji yakho ngokwakho, ungonga iindleko. Konke kuya kufuneka uhlawulele izixhobo.
Ukuba uza kuzenzela ngokwakho kwaye wakhe igaraji engafunekiyo, iindleko zezinto eziphathekayo ziya kukuxabisa malunga ne- $ 5,000 ukuya kwi- $ 25,000. Ewe, kunjalo kuya kuxhomekeka kubungakanani begaraji yakho kunye nezinto ozisebenzisayo.
Kwakhona, kukho ikiti yegaraji ye-prefab ekhoyo, ke ukuba yonke into oyifunayo yigaraji elula ungakhangela kwezi. Iikiti zokuqala zegaraji zihlala zibiza malunga ne-3,000 ukuya kwi-10,000. Gcina ukhumbula, nangona kunjalo, ukuba imibutho yabanini makhaya ayivumeli izakhiwo ze-prefab ezinje ngezi. Qiniseka ukuba ujonga ngaphambi kokuthenga ikiti.
uyinxiba phi iringi yakho yokuzibandakanya
Inye kuphela into ongamele uyilibale ukuba unomdla kuyo, nokuba uthatha isigqibo sokwakha igaraji ngokwakho okanye ukuqesha umntu oza kukwakhela yona, kukwakha igaraji kuya kufuna ukuba ufumane iimvume ezifanelekileyo zokwakha.
Kuxhomekeka ekubeni uphi, iindleko zemvume yokwakha igaraji ziya kuba malunga ne-1,200 ukuya kwi-1,500 yeedola.
Unokwenza esakho isicwangciso usebenzisa enye ye Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo kwimarike. Oku kuyakuvumela ukuba utshintshe isitayile, uyilo kunye neekwere zekwere usebenzisa ubungakanani kwiyadi yekhaya lakho.
log zasekhitshini ekhaya
iilokhwe zomama womtshakazi
Ithetha ukuthini xoxo ekuthumeleni imiyalezo
ungayenza njani into yokuba umfana wakho acebise